Umshini we-fibre laser
Metal CNC umzila
Umshini we-laser we-CO2
CO2 Ukusika kwe-Laser kanye Ne-Engraving Machine
Umshini wokusika we-Metal-Non Metal CO2 Laser
Umshini wokumaka i-Laser
Umshini wokusika wePlasma
Ungayikhetha Kanjani I-CNC Router Machine Spindle?
1. Umshini wokuqopha wokukhangisa: into eqoshiwe iyinto ethambile, ngakho-ke amandla othini lokuphrinta womshini wokuqopha angaba ngaphakathi kwe-1.5kw-3.0kw. Uma ukhetha ngale ndlela, ungafinyelela inhloso yokuqoshwa bese ugcine izindleko. 2.Umshini oqoshiwe wokhuni: I-spin ...Funda kabanzi »
Lungisa usebenzisa indlela yamatshe wokuqopha umshini
Isikhathi Iposi: Sep-02-2020
(1) Indawo yokusebenza Umshini wokuqopha itshe uyimishini yobuchwepheshe be-mechatronics, enezidingo ezithile zemvelo yokusebenza. ...Funda kabanzi »
Ungayikhetha Kanjani i-Stone CNC Router Machine Blades? Umhlahlandlela wabasebenzisi bamathuluzi wokuqopha amatshe amatshe
Amatshe we-Stone CNC Router kumhlahlandlela womsebenzisi: 1. Ngokusikwa kwe-acrylic komshini wokuqopha ngamatshe, kunconywa ukusika okusika ohlangothini olulodwa. Kubonakala ngokucubungula okungenantuthu futhi okungenaphunga, isivinini esisheshayo, ukusebenza kahle okuphezulu, okungekho okunamathelayo, okunobungane kwezemvelo, kanye nomoya ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Mar-03-2020
Kusukela ngoJanuwari 2020, isifo esithathelwanayo esibizwa nge- “Novel Coronavirus Infection Outfallak Pneumonia” sivele eWuhan, eChina. Lubhubhane luthinte izinhliziyo zabantu emhlabeni wonke, lapho bebhekene nalesi sifo, abantu baseChina benyuka nezwe lonke, basebenza ngenkuthalo ...Funda kabanzi »
27, Julayi, 2019, amakhasimende aseNdiya eza efektri yethu
Isikhathi sokuthumela: Jul-30-2019
27, Julayi, 2019, kuwusuku olushisayo lapha eJinan China, Amakhasimende aseNdiya eza ukuzovakasha efektri yethu, anokwamukela nonke abangane bethu. Abangani baseNdiya bavakashela umnyango wethu wokukhiqiza umshini we-CNC cishe amahora amathathu, babe sebevakashela umnyango wethu wokukhiqiza umshini we-laser ngemuva kokuhambela ...Funda kabanzi »
Uyini umshini we-CNC router?
Isikhathi sokuthumela: Meyi-28-2019
I-CNC ROUTER I-router ye-computer numerical control (CNC) ye-computer ngumshini wokubhoboza olawulwa yikhompyutha nomshini wokusika ophathelene ne-router ebanjwe ngesandla esetshenziselwa ukusika izinto eziningi ezinzima, njengokhuni, izinhlanganisela, i-aluminium, insimbi, ipulasitiki, ingilazi kanye namagwebu.  Ama-CNC routers angenza imisebenzi yama-c amaningi ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Meyi-21-2019
IShandong DADI CNC Equipment Co, Ltd yasungulwa ngonyaka ka-2014. Ingumkhiqizi ochwepheshe we-CNC ROUTER kanye ne-CNC LASER Machine.Products asetshenziswa kabanzi: emkhakheni wokukhangisa, imboni yokwenza izinkuni, imboni yamatshe, imboni yefenisha, i-aluminium ikhethini lokuhlobisa udonga kanye nezinye ind ...Funda kabanzi »
Nakani ukuthengwa laser cutting umshini
isikhathi Iposi: Aug-03-2018
Ukusetshenziswa jikelele laser cutting umshini ulilethele lula ngokucubungula metal umkhakha. Uma namanje dazzled ngu eziningi imishini laser cutting, ungakwazi silalela lezi amaphuzu. 1. ahlabayo izinga laser cutting: sengathi ezinye kitchenware, izimoto, imishini, hardware kanye nezinye ...Funda kabanzi »
Hlobo luni ekhaya umhlobiso kungaba laser cutting umshini ukudala?
Inqubo laser eqoshwe akuyona nje "ummese" ecijile umkhakha wekukhicita, kodwa ngisho imihlobiso kanye nemisebenzi yezandla ukuthi sibona yonke indawo ekuphileni kwethu kwansuku zonke asikwazi uhlukane lokuqopha laser. Ake sibheke ukuthi zingubo zini umndeni singakha. Ukusetshenziswa laser ...Funda kabanzi »
Isixazululo laser ukufingqa ehlobo
Ngalesi sikhathi, kuba ngesikhathi kwesikhathi Meng Xia, lapho kuduma izulu kwandisa, emvuleni njalo endaweni eswakeme kalula eziholela ukufingqa ku laser, lokho kukunciphisa ngokuphawulekayo ukudleka ukusebenza kohlelo laser futhi kungenzeka lilimele. Indlela ukuxazulula mkhuba laser ukufingqa? Yini s ...Funda kabanzi »
Ikheli: Igumbi 1102, North Rongsheng Times International Building 6, Quanfu Overpass, Isifunda saseLicheng, idolobha laseJinan, isifundazwe saseShanDong, eChina
Ucingo: +86 15688488223
I-DADI CNC: Sawubona, Siyakwamukela ukuvakashela iwebhusayithi yethu.
I-DADI CNC: Ngingakusiza?